नेपाल एयरलाइन्स बेइजिङ र सिड्नी उड्दै - नेपालबहस
नेपाल एयरलाइन्स बेइजिङ र सिड्नी उड्दै
| १२:५८:५२ मा प्रकाशित
२४ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम ‘नेपाल एयरलाइन्स’ को दुई वाइडबडी जहाज आज चीनको बेइजिङ र अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा चार्टर्ड उडान गर्दैछ । निजी व्यवसायीले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन तथा सम्बन्धित मुलुकले आफ्ना नागरिक ल्याउन निगमको वाइडबडी जहाज चार्टर्ड गरेका हुन् । उडान तालिकाअनुसार पहिलो चार्टर्ड उडान अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा हुनेछ ।
वाइडबडी जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिउँसो १ः३० बजे उड्ने र भोलिपल्ट साँँझ ५ बजे काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ । दोस्रो जहाजले साँझ ५ः३० बजे बेइजिङमा कार्गो उडान गर्नेछ । भोलिपल्ट काठमाडौं फर्कने तालिका छ । दुवै अन्तराष्ट्रिय गन्तव्यको उडान निर्धारित तालिकामै हुने निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता खड्काका अनुसार नेपालमा रहेका २६४ अष्ट्रेलियाली नागरिक लिएर निगमको वाइडबडी जहाजले सिड्नी गन्तव्यमा चार्टर्ड उडान गर्न लागेको छ । वाइडबडी जहाज अष्ट्रेलियाबाट रित्तै फर्कनेछ । लोड कम हुने भएकाले सिधा सिड्नी–काठमाडौं उडान हुने जनाइएको छ । निगमले यसअघि चैत १९ गते अष्ट्रेलियाको ब्रिश्वेनमा चार्टड उडन गरेको थियो । मलेशिया ट्रान्जिट हुँदै अष्टे«लियासम्मको यो उडान करिब १३ घण्टाको थियो । निगमको पुनः अष्ट्रेलिया उडान क्वालालम्पुर ट्रान्जिट भएर सिड्नी पुग्नेछ भने सिड्नीबाट फर्कँदा सिधैँ काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ । काठमाडौँ–सिड्नी साँढे १२ घण्टाको उडान हुनेछ ।
बेइजिङ पहिलो र ऐतिहासिक उडान
नेपाल एयरलाइन्सको बेइजिङ उडान पहिलो र ऐतिहासिक उडान हुनेछ । अहिलेको विषम परिस्थितमा गर्न लागिएको कार्गो उडान भए पनि बेइजिङ उडान निगमको उड्डयन इतिहासमै पहिलोपटक भएको निगमले उल्लेख गरेको छ । काठमाडौं–बेइजिङ करिब सात घण्टाको उडान हुनेछ ।
निगमले यसअघि चीनको साङ्घाइ हुँदै जापानको ओसाका उडान गर्ने गरेको थियो । सन् १९८४ ताका निगमले सो गन्तव्यमा उडान शुरु गरेको भए पनि अप्रिल १२ सन् २००७ मा जहाज अभावले ओसाका उडान बन्द भएको थियो । अघिल्लो वर्ष भदौ १२ देखि पुनः उडान शुरु गरिए पनि विसं २०७६ फागुन १९ देखि जापानकै नारिता उडान शुरु भएपछि ओसाका गन्तव्यको उडान बन्द भएको थियो ।
निगमले चीनको ग्वान्जाओमा व्यावसायिक उडानका लागि अनुमति पाएको थियो । नेपालमा कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएपछि उडान हुनसकेको छैन । बेइजिङलगायत गन्तव्यमा निरन्तर पहल गरिए पनि अझै उडान अनुमति पाउन सकेको छैन । अहिले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने नेपालको निजी लगानी र चीनको संयुक्त लगानी भएको हिमालय एयरलाइन्सले चीनको बेइजिङ र छोङ्गिनलगायत गन्तव्यमा उडान गर्दै आएको छ । निगमले भने ‘शुरुको साङ्घाइ उडानबाहेक’ अहिलेसम्म चीनमा व्यावसायिक उडान गर्न पाएको छैन । बेलाबखत कार्गो तथा चार्टर्ड उडान मात्रै हुँदै आएको छ ।
वैशाख ३० गते दक्षिण कोरियामा उडान
निगमको वाइडबडी जहाजले दक्षिण कोरियामा पनि चार्टर्ड उडान गर्दैछ । आगामी १२ मेका लागि दक्षिण कोरियाको सिओल उडान गर्ने निश्चित भएको निगमका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । वैशाख ३० गते ५ बजे उडान गर्ने छ भने भोलिल्ट ८ः४५ बजे काठमाडौं अवतरण हुनेछ । नेपाली कामदारलाई दक्षिण कोरिया लैजान गैरआवासीय नेपाली सङ्घ कोरियाले जहाज चार्टर्ड गरेर लैजान लागेको जनाइएको छ । काठमाडौँ विमानस्थलबाट कोरियाको सिओलस्थित इङचोन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार इपिएस प्रणालीअन्तर्गत कोरिया काम गर्ने अनुमतिप्राप्त वैध प्रवेशाज्ञा ‘भिसा’ भएका हाल बिदामा रहेका नेपाली स्वेच्छाले आफ्नो काममा फर्की जान चाहेमा निजहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गराइ उनीहरुकै खर्चमा चार्टर्ड उडानबाट जान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप कोरिया उडान गर्न लागिएको हो ।
मुलुकमा जारी लकडाउन तथा अन्तराष्ट्रिय हवाई आवागमन स्थगन गरिएको अवस्थामा नेपाल एयरलाइन्सले चार्टर्ड तथा कार्गो उडान गरिरहेको छ । निगमले अष्ट्रेलिया र चीनमा पुनः उडान गर्न लागेको हो । लकडाउनको अवधिमा सर्वाधिक उडान गरेको नेपाल एयरलाइन्सले भारत, बङ्गलादेश, जापान र अष्ट्रेलियामा चार्टर्ड उडान ग¥यो भने चीनको ग्वान्जाओमा चार कार्गो उडान गरेको छ ।
लकडाउन अवधिमा आठ अन्तराष्ट्रिय उडान गरेको नेपाल एयरलाइन्सलको वाइडबडी जहाजले पहिलोपटक चैत १६, २० र २४ गते चीनको ग्वान्जाओबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो । त्यस्तै चैत २८ गते जापानको नारितामा चार्टर्ड उडान गरेको थियो । भारतको नयाँ दिल्ली र बङ्गलादेशको ढाकामा पनि निगमले चार्टर्ड उडान गरेको थियो । हाल दुई वाइडबडी ए–३३० र दुई थान न्यारोबडी ए–३२० सिरिजको जहाजबाट निगमले अन्तराष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा खेलकूद परिषद्को पदाधिकारी नियुक्त ७ मिनेट पहिले
घोराहीमा तास खेलिरहेको अवस्थामा ५ जना पक्राउ ७ मिनेट पहिले
विमानस्थलबाट स्रोत नखुलेको २४ लाखसहित एकजना पक्राउ १० मिनेट पहिले
२१ औं समूहको ट्राफिक प्रशासन तालिम सम्पन्न १३ मिनेट पहिले
जसपा कार्यकर्ता रिहा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय १६ मिनेट पहिले
चितवनमा विद्यार्थीलाई देखियो कोरोना संक्रमण १८ मिनेट पहिले
ब्राजिलमा कोरोनाबाट एकै दिन १ हजार भन्दा बढिको मृत्यु २० मिनेट पहिले
सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखायाे : नेता सिंह २६ मिनेट पहिले
हुलाक टिकट बिक्री काउन्टरको व्यवस्था गर्दै जिप्रका २६ मिनेट पहिले
कोभिड-१९ नियन्त्रण आदेश जारी गरिदै ३२ मिनेट पहिले
प्रथम मेयर कप फुटसल प्रतियोगिता वैशाख ९ बाट ३४ मिनेट पहिले
राष्ट्रपतिद्धारा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश नियुक्त ३९ मिनेट पहिले
नेपाली नारी समाज पोर्चुगलको अध्यक्षमा शिवानी ४४ मिनेट पहिले
मतदातासँग भेटघाटमा व्यस्त वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी ४६ मिनेट पहिले
सङ्घीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको भूमिका थप स्पष्ट गरिने १७ घण्टा पहिले
सोमबार पाँच अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल विक्री हुने १६ घण्टा पहिले
नवौं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिबलमा एक दिने फिल्मी कार्यशाला हुँदै २२ घण्टा पहिले
सिभिल बैंकका सीईओ गुरुङको राजीनामा स्वीकृत २ घण्टा पहिले
लेकाली भेगैमा सुनिलसँग उर्मिलाको रोमान्स ५६ मिनेट पहिले
तपाईको आजको राशिफल कस्तो छ ? ५ दिन पहिले
कोरोनाविरुद्ध सचेत गराउदै ट्राफिक प्रहरी ७ दिन पहिले
चुरे क्षेत्रका बासिन्दा खानेपानीको सङ्कट झेल्दै २१ घण्टा पहिले
आरक्षबाट आएको हात्तीको आक्रमणबाट किसानको मृत्यु ३ दिन पहिले
खनाल-नेपालको बेग्लै सर्कुलर ७ दिन पहिले
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका लाभांश घोषणा ३ दिन पहिले
चलचित्र ‘लाइफ इन एलए’ निर्माण हुदैं ३ हप्ता पहिले
दमकमा टिपरको ठक्करबाट एकको मृत्यु, चालक प्रहरी नियन्त्रणमा ४ हप्ता पहिले
रोमान्टिक गीत हेरनमा निराजन र आचल ३ हप्ता पहिले
युरोपमा लकडाउन, टोकियो ओलम्पिकमा विदेशी दर्शकलाई प्रवेश निषेध ४ हप्ता पहिले
आगामी वैशाख ७ देखि कोभिड खोपको दोस्रो डोज लगाइने ६ दिन पहिले
पत्रकार महासंघमा युनियनका उम्मेदवार इन्द्र रिजालको तर्क दमदार ४ हप्ता पहिले
मुम्बाई अस्पतालकाे आगलागीमा परी ९ जनाको मृत्यु ३ हप्ता पहिले
जथाभावी बाटो नकाटिनुहोला, दुर्घटना हुन सक्छ ! ४ हप्ता पहिले
मन्थली मा.वि. शैक्षिक अवलोकनको केन्द्र बन्दै १ वर्ष पहिले
छ अङ्कले बढ्यो शेयर बजार २ वर्ष पहिले
घारखोलामा मोटर चल्ने पुल निर्माण शुरु २ महिना पहिले
निगमको वाई १२ जहाज धावनमार्गमा चिप्लियो १ वर्ष पहिले